Mapisarema 91 munyengetero Mazano Ekudzivirira | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato Mapisarema 91 munyengetero Pfungwa dzeDziviriro
Mapisarema 91: 1:
Iye, anogara pakavanda We Wekumusoro-soro, anogara mumumvuri woWamasimbaose.
Bhuku ra Mapisarema ndiro bhuku remunamato rine simba kwazvo kupasi rino uye zvimwe. Wese mutendi anenge achida kuona kuratidzwa kwakagadzwa kwaMwari muhupenyu hwake hwemunamato, anofanira kutora mukana webhuku remapisarema. Nhasi tichave tichiita munamato wePfumbamwe pamunamato nzvimbo dzekudzivirira. Iri bhuku remapisarema 91 munamato we kuchengetedzwa Pisarema. Sevatendi tinofanirwa kugara takangwarira uye tisatendera Dhiabhori kana vamiriri vevanhu kuti vatishamise.
Mapisarema 91 ipfuti yakaremerwa kana totaura nezvekudzivirirwa pamweya. Kuburikidza nePisarema 91, akawanda eanemasimba minyengetero mativi ekudzivirira anogona kutora. Nhasi, ini ndichave ndichibaya zvine simba mapisarema 91 munyengetero mapoinzi ekuchengetedza iwe.
Iyi minamato yemunamato ichaunza pasi pesimba ra Mwari pamusoro pehupenyu hwako, uye kuburikidza nekutenda kwako, zvese zvombo zvemuvengi pamusoro pehupenyu hwako zvinodzoka nemoto muzita raJesu.
Nei Munamato Wekudzivirira?
Isu tinorarama munyika yakaipa nhasi, uye dhiabhori haasi kuwana chero mutsa. Wese mutendi anofanira kupukunyuka kurwiswa kwerima anofanira kunge achipa kuminamato yakadzama uye nokunzwisisa kwemweya izwi. Bhaibheri rinotaura nezve musungo weanovinga, (Mapisarema 91: 3), izvi zvinoreva misungo yemuvengi. Dhiyabhorosi ari kubatikana kuisa misungo yevatendi, semuenzaniso misungo yehukama, makristu mazhinji akabatwa muwanano dzisina kunaka uye nevanhu vasina kunaka, kune vamwewo amadzibaba misungo, uko vatendi vari kurwira nemasimba emadzitateguru uye nemadhimoni madhimoni. Bhaibheri rinotaurawo nezvenjodzi, neusiku, museve masikati, nedenda rinofamba-famba murima, uku kurwisa kwemweya kwakasiyana kunokandirwa kune vatendi kubva mumakomba egehena.
Izvi zvakaipa zvinotakurwa nevasatani uye nevanhu vemadhimoni, ndosaka uchiona vanhu vachifa nekurohwa uye nehurwere zvisingazivikanwe, hurwere husinga tsanangurike kuburikidza nekuongororwa kwachiremba. Iri pisarema 91 munyengetero mativi ekudzivirira, anozokubatsira iwe pamunamato kuvaka wall yekudzivirira pamusoro pehupenyu hwako. Kubva nhasi, hakuna dhiabhori kana madhimoni anomiririra hupenyu hwako muzita raJesu. Namata iyi minamato mukutenda nhasi uye uone kuchengetedzwa kwamwari muhupenyu hwako mune zita raJesu.
Mapisarema 91 Minamato yeMinamato
1. Baba, ndinozviunza munzvimbo yenyu yakavanzika uye mumumvuri wenyu nhasi muzita raJesu
2. Baba, ndinoparidza nhasi kuti ndimi utiziro hwangu nenhare yangu muzita raJesu
3. Ndinozvichengetedza nhasi kubva kune zvinotyisa zvehusiku muzita raJesu
4. Chero dhimoni roga roga rakatumirwa kundirwisa usiku hunodzoreredzwa nemoto muzita raJesu
5. Chero boka rakaipa rinorangana kana kurangana uye rinondimukira rinogadziriswa muzita raJesu.
6. Ndinozvidzivirira pfumo rega rega rinobhururuka masikati muna Jesu
7. Wese madhimoni anotumira miseve kwandiri masikati, anodzoka kune anotumira muzita raJesu
8. Miseve yega yega yekudzedzereka ichadzokera kune inotumira muzita raJesu
9. museve wese werufu usingafungidzirwe uchadzokera kune watumira muzita raJesu
10. Miseve yega yega yevakaroora inodzokera kune inotumira muzita raJesu
11. Ndinozvidzivirira kubva pakuparara kwese kunorwisa masikati masikati muzita raJesus
12. Ini ndinosunungura vatumwa vaIshe kuti vatungamirire mberi kwangu zuva nezuva, kuti vandidzivirire kubva kurudzi rwese rwekuparadzwa muzita raJesu.
13. Ishe, sunungurai mweya wangu kuti utevere kutungamira kweMweya Mutsvene.
14. O Ishe wedzera kunzwa kwangu kwemweya, muzita raJesu.
15. Ishe, ndinunurei kubva kunhema dzandinoreva.
16. Wese mweya yakaipa padha necheni yakashata, ichitadzisa kubudirira kwangu, roast, muzita raJesu.
17. Ini ndinotsiura mweya yega yega yekusuwa pamweya neupofu muhupenyu hwangu, muzita raJesu.
18. O Ishe, ndipe simba kuti ndidzivise satan kuti azonditiza.
19. Ini ndakasarudza kutenda chirevo chaIshe uye kwete chimwe, muzita raJesu.
20. O Ishe, zodzai maziso angu nenzeve dzangu kuti vaone uye vanzwe zvinoshamisa kubva kudenga muzita raJesu.
21. Ini ndinokanganisa kushandura kwakaipa kwese kwesimba rangu, muzita raJesu.
22. Ropa raJesu, vharira nzira inobhururuka yemasimba akaipa, yakatarwa kwandiri.
23. Uroyi hwese hunotuka, pwanya uye uparadzwe, muzita raJesu.
24. Sungano yese yeuroyi, yakanyauka neropa raJesu.
25. Ini ndinobvisa nhengo yese yemuviri wangu kubva kuatari yeuroyi chero ipi, muzita raJesu.
26. Chero chakasimwa muhupenyu hwangu nemuvengi, buda ikozvino ufe, muzita raJesu.
27. Ropa raJesu, dzima kutanga kwese kwaSatani, kwakagadzirirwa kupokana neni, muzita raJesu.
28. Uroyi huroyi hwese, ngauparadzwe, muzita raJesu.
29. Ini ndinodzosera maitiro ese euroyi, akagadzirirwa kupokana neni, muzita raJesu.
30. Chero huroyi hwechikadzi, hwakagadzirirwa kupokana nehupenyu hwangu, ngauparadzwe, muzita raJesu.
31. Dambudziko rese muhupenyu hwangu, iro rakatanga kubva kun'anga, gamuchira hutsvene uye nekukurumidza mhinduro, muzita raJesu.
32. Kukuvadza kwese kunoitwa muhupenyu hwangu nen'anga, kugadziridzwa, muzita raJesu.
33. Chikomborero chose, chinotorerwa nemidzimu yeuroyi, ngachirege kusunungurwa, muzita raJesu.
34. Simba rose reuroyi, rakapihwa hupenyu hwangu nemuchato, ngariparadzwe muzita raJesu.
35. Ini ndinosunungura pasimba reuroyi, muzita raJesu.
36. Musasa wega wega weuroyi, akaungana pakurwisa budiriro yangu, unowira pasi ugofa, muzita raJesu.
37. Hari yega yega muhari, inoshanda kwandiri, ndinounza kutonga kwaMwari pamusoro pako, muzita raJesu.
38. Hari yega yega muhari, uchishandisa kure kudzora hutano hwangu, pwanya muzvidimbu, muzita raJesu.
39. Varoyi vanopikisa, gamuchira iyo mvura yenhamo, muzita raJesu.
40. Iwe mweya weuroyi, rwisa mweya yaka kujairirwa kwandiri, muzita raJesu.
Previous nyaya30 minamato Yekutenda Yekuzvarwa Zuva Resimba
inoteveraMapisarema 35 Minyengetero Yekupesana Nevavengi Vakaipa
.. Kurume 19, 2020 Pa 7: 34 am
Ij Kubvumbi 15, 2020 At 10:16 pm
jacquelynjones Zvita 7, 2020 At 8:40 pm
Ndinokutendai asi ndingafarire if kana mukakwanisa kuisa magwaro pazvinhu zvese nemunamato sezvo ndiri mutendi ndichidzokorodza shoko raMwari kwaari. Unakidzwa nezvakatumirwa. Ndatenda
Kamil Chivabvu 23, 2021 nenguva dza 1:10 pm
Dobrí deň som vážne chorí potrebujem božiu po
28 Nzvimbo dzemunamato dzekuregerera zvivi